The Facebook Times: ထူးဆန်းထွေလာပြည်မြန်မာ -အပိုင်း ( ၁ )
ထူးဆန်းထွေလာပြည်မြန်မာ -အပိုင်း ( ၁ )
(၁)မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးရေသုံး ၍ အိမ်သာတက်ခဲ့သော ဘုရင်မှာ ဘိုးတော် ဦးဝိုင်း ( ၁၇၈၂- ၁၈၁၉ ) ဖြစ်သည်။
(၂)၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် သူ့ကျွန်ဘ၀ ကျရောက်ပီး ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့သောစက်ရုံသည် မန္တလေး ဘီယာ နှင့် အရက်ချက်စက်ရုံဖြစ်သည်။
(၃)တယ်လီဖုန်းအား လေပေါ်မြှောက်ကာ ဝှေ့ရမ်း၍ လိုင်းရှာရသော နည်းပညာ ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ စတင် တီထွင်ကာ ရောင်းချခဲ့သည်။
(၄)သတင်းစာကို နောက်ဆုံး မှ လှန်ဖတ်သော ဓလေ့စရိုက် သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာရှိသည်။
(၅)ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆောင်ပုဒ် အများဆုံး နိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်သည်။
(၆) ခြင်တောင်လှန်၍ သန်းခေါင်စာရင်းစစ်သောအလေ့အထသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြန်မာတနိုင်ငံတည်း၌သာရှိသည်။
(၇) ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၀ါးတားဂိတ် (၀ါးလုံးတား၍ပိုက်ဆံတောင်းသောဂိတ်)အများဆုံးတိုင်းပြည်မှာ မြန်မာပြည်ဖြစ်သည်။
(၉) နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲသို့ တိုက်ပေါ်မှအမှိုက်ပစ်ချသော
အမှိုက်စွန့် စံနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းတွင်သာရှိသည်။
(၁၀) ဒီမိုကရေစီပါလီမန်ဟုဆိုသော လွတ်တော်ထဲတွင် (၂၅%) သော
စစ်ယူနီဖေါင်းဝတ်ထားသူများ မျက်နှာမာများနှင့် မျက်နှာပြောင်တိုက်
ထိုင်နေသော ဒီမိုကရေစီလွှတ်တော်သည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးသော
(၁၁) အိမ်သာများတွင် နိုင်ငံခြားသားအတွက်သီးသန့် 
(၁၂) မြို့ လည်ခေါင်တွင် ခရီးသည်တင်ကားများကို လက်တား၍
(၁၃) ကမ္ဘာပေါ်တွင် မီးအားမြှင့်စက်အရောင်းရဆုံးတိုင်းပြည်မှာမြန်မာပြည်ဖြစ်သည်။
(၁၄) ကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်တာနက်အနှေးဆုံးနှင့် Overseas PhoneCall ဈေးအကြီးဆုံးမှာ မြန်ပြည်ဖြစ်သည်။
(၁၅) ဈေးဝယ်ပြီး ငွေအကြွေ မအမ်းနိုင်၍ပစ္စည်းနှင့်လဲလှယ်သော
‎Lon Ely‎, ‎သံလွင် ငယ်‎, ‎Ko Ko Oo‎ and ‎‎199‎ others‎ like this.
Lon Ely မဆဲနဲ့နော်....ဟီးဟီး..ဟာသ..အနေနဲ့ပါတင်လိုက်တာပါ
‎Monday‎ at ‎23:26‎ · Like · 5
Thu Zar correct..
‎Monday‎ at ‎23:29‎ · Like · 1
Min Kha ဟာ
Min Kha ခင်ညားဂျာ
Min Kha ဘာယို့ အမှန်ကြီးပြောရတာလဲ
‎Monday‎ at ‎23:30‎ · Like · 2
Min Kha ရီရဘူး
‎Monday‎ at ‎23:30‎ · Like · 1
Takin Oo ဟဟဟဟဟဟဟဟညည
Htet Aung ဆဲပါဝူးးး အပိုင်းနှစ်အမြန်မလာရင်တော့ ......ဒါလည်း အဆဲပါဝူးးးးးးဂျ
Min Kha ဂျာ
Shadowphyu Phyupainေိေိ
ကို သိ င်္ခ ကျုပ်လိုဂိုကြီးယူလို့ပါလား ... ဟားဟား ခင်ဗျား အတော်ဆိုးတဲ့လူဗျာ :)
‎Monday‎ at ‎23:31‎ · Like · 1
သံလွင် ငယ် ကိုလုံ....ဇာတ်သိမ်းပိုင်းထိ ဖတ်ချင်တယ်နော်.......
‎Monday‎ at ‎23:34‎ · Like · 2
Zaw Lin အပိုင်း (၂) မြန်မြန်တင်ဗျို့...
‎Monday‎ at ‎23:35‎ · Like · 1
Min Kha ထုံးစံအတိုင်းပါပဲဇတ်သိမ်းပိုင်းရောက်ရင် အကြီးအကဲ သားသမီးနဲ့ သူဌေးကြီးတို့ရဲ့သားသမီးညားကြလေသတည်းပေါ့ စိန်တွေ လက်ဖွဲ့ခံချင်ကြတာလေ
‎Monday‎ at ‎23:36‎ · Like · 3
Wyut Mhon နံပါတ် ၄ ဂျာပန် လူမျိုးများ လဲ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာမှ စ၍ ဖတ်ကြ သည်
‎Monday‎ at ‎23:37‎ · Like · 2
ခွန် ကိုကို တိုကြီး..ကြာလေ မိုက်လေ မိုက်မိုက်လာတယ်ဗျာ....
‎Monday‎ at ‎23:41‎ · Like · 1
အချစ် နတ်ဆိုးမလေး ၀ိုးးးးးဒို့ တိုင်းပြည်တိုးတက်နေတာငါအရင်ကမသိပါလားနော်...ကျေးဇူးးးးပြောပြလို့ေ်ေ်....
‎Monday‎ at ‎23:43‎ · Like · 2
အလွမ်း နတ်သားလေး ထောက်ခံပါဒယ်ဗျို့.
‎Monday‎ at ‎23:50‎ · Like · 1
Lily Htut အပိုင်း (၂) မြန်မြန်
‎Monday‎ at ‎23:51‎ · Like · 1
Nyinyi Lwin မြန်မာပြည်တွင်facebook စတင် အသုံးပြုသူမှာ ကိုလုံဖြစ်သည်
‎Monday‎ at ‎23:57‎ · Like · 3
Austin Phyo ရှဲပါသည်။
‎Monday‎ at ‎23:58‎ · Like · 1
Phyo Wai Than ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘာမှမပြောမဆိုပဲကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားသူမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကပင်ဖြစ်သည်
Yesterday at ‎00:06‎ · Like · 1
Soe Thu Ko Lon Ely သူငယ်ချင်း ခင်ဗျားစာများများဖတ်ဗျာ။ သူတထူး ကို အပုဒ်ချချင်ရင် ခင်ဗျား သူ့ထက်တော်အောင် တတ်အောင် ကျိုးစား။ ခင်ဗျား နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတ နည်းတာ ၀န်ခံ။ အာရပ်သတင်းစာ နောက်ကစဖတ်တယ်။ ကျူးဘား သမ္မတ ကက်စထရို ဟာ နုိုင်ငံသာတွေမျိုးချစ်စိတ် ဓါတ် တက်ကြွဖို့အတွက် ဆောင်ပုဒ် ၁၀၀၀ ကျော်ရေးပြီး အမေရိကန်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကို တန်ပြန်ခဲ့တယ်။ ( အကုိုးအကား ကျွန်တော်ခုမပြနိုင်သေးဘူး။ ခင်ဗျားဖာသာ ၇ှာဖတ်) ကျုပ်အား၇င် တင်ပေးမယ်၊ရှင်းလား) ။ မြန်မာပြည်မှာလို ၀ါးမရှိလို့ ကွန်ကရစ်တုံးနဲ့တားနေတာ အီရန်၊ ရုရှား၊ အီရတ်၊ မက္ကဆီကို(ဘိန်းရာဇာများခြေရှုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်၊ ခင်ဗျားသိအောင်ကျုပ်ပြောပြတာ၊ ၀ိကီပီးဒီးယား ရှာမနေနဲ့)၊ သီရိလင်္ကာ(တမီးလ်သူပုန်သတ်လို့ ဘုရင်စနစ် တောင်ပျက်တဲ့နိုင်ငံ)။ ကျုပ်တို့မြန်မာတွေ သောက်စည်းကမ်းမရှိလို့ အိမ်သာမှာ အဲဒီလိုရေးတာ ခင်ဗျားရှက်သင့်တယ်။ အစိုးရအပြစ်မဟုတ်ဘူး..ကျုပ်လူဖြစ်လို့မြန်မာကိုယ်စား ရှက်တယ်။ မြန်မာပြည်လောက်လုံခြုံရေး စိတ်ချရတာ ဘယ်ကဓါးပြ မြို့ပေါ်မှာရှိမလဲ။ ငွေစက္ကူအထပ်လိုက် ကြွတ်၂ အိပ်ထဲထဲ့ပြီး မြို့ထဲ လမ်းလျှောက်လို့ရတာ မြန်မာပြည်ဘဲ ရှိတယ်ဆိုပြီး။ နိုင်ငံခြားသားက ချီးကျူးသွားတာ ခင်ဗျားသိလား။ ခင်ဗျား ခွေးခြေရာထဲမှာ နေပြီး အော်မနေနဲ့၊ မိုးသီးဇွန်တောင် လူလုံးထွက်ပြရဲသေးတာ ခင်ဗျားလဲ ထွက်ပြလိုက်တော့။ ခင်ဗျားလို ကောင်တောင် အမှားမကင်းနိုင်တာ။မြန်မာပြည်မှာလဲ။နုိုင်ငံတိုင်းမှာလဲ အမှားရှိတယ်မှတ်။ နောက်အပိုင်းထွက်လာရင် ခင်ဗျားအတွက် ဆေးမှီပါမလားဗျာ။
Yesterday at ‎00:24‎ · Like · 1
Winmyint Aung ကမ္ဘာပေါ်တွင်....ကားတန်ဖိုးမှာ.... မူလတန်ဖိုး ဘာမျှမရှိပဲ...ဟိုအခွန်..ဒီအခွန်..ဘာညာကွိကွ တွေပေါင်းသဖြင့်...ဈေးအကြီးဆုံး နိုင်ငံမှာ.မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်...။
Yesterday at ‎00:31‎ · Like · 1
Thant Sin Oo Israel တွင်လည်း အလွန်ဈေးကြီးပါသည်. အခွန်ကို နည်းမျိုးစုံဖြင့်ကောက်ပြီး.. မည်သည့်ပစည်းဝယ်ဝယ် value added tax ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းကောက်ပါသည်.. Israel နှင့် ယှဉ်လျင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပေးရသည့် အခွန်မှာ အလွန်နည်းပါသည်.. ကားအသစ်တစ်စီးသွင်းလျင် အခွန် ၁၈၀ ရာခိုင်နှုန်း + value added tax ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း ပေးရပါသည်.. သိသလောက် မျှဝေတာပါ.. Lon Ely မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေရတာ အဆင်မပြေဘူးထင်ရင်.. အာဖရိက နိုင်ငံတွေဖြစ်ဖြစ်.. middle east က နိုင်ငံ တွေမှာ ဖြစ်ဖြစ်သွားနေကြည့်ပါ... မြန်မာနိုင်ငံ၏ တန်ဖိုးကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်...
Yesterday at ‎00:49‎ · Like · 3
မင်းမင်း အပျင်း ပေါ့ isreal ကတော့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကြမ်းလွန်းလို့သာနေပါမယ်ထင်တယ် ဗျ
Yesterday at ‎02:23‎ · Like · 2
Mg Mg ဟဟ
Yesterday at ‎02:27‎ · Like · 1
Mg Mg ကိုစိုးသူကို....ကြည့်ရတာ.....ဟာသ..အနေနဲ့မကြည့်ပဲ.....တယ်ရန်လိုတာကိုးဗျ.......ဆောက်ရူးကြီး.....ကြည့်ရတာ...စစ်ခွေးနဲ့တူတယ်ဗျ....ဒီမှာခင်ဗျားရေးထားတာ......====မြန်မာပြည်လောက်လုံခြုံရေး စိတ်ချရတာ ဘယ်ကဓါးပြ မြို့ပေါ်မှာရှိမလဲ။ ငွေစက္ကူအထပ်လိုက် ကြွတ်၂ အိပ်ထဲထဲ့ပြီး မြို့ထဲ လမ်းလျှောက်လို့ရတာ မြန်မာပြည်ဘဲ ရှိတယ်ဆိုပြီး။ နိုင်ငံခြားသားက ချီးကျူးသွားတာ ခင်ဗျားသိလား။ ====အရူး..မင်းအုန်းနှောက်ကို...ဘင်္ဂလီသေးနဲ့ဆေးလိုက်..မြန်မာငွေကဘယ်လောက်တန်လို့လဲ......အိမ်ထဲမှာနေပီး...မိန်းမလုပ်စာစားပီးလိုင်းပေါ်တက်ပီးလာဖြဲနေတယ်...ခြေပြတ်တွေမဟုတ်ရင်......အောက်ဆွဲတွေနေမှာ...ငါပြောတယ်နော်..သေးနဲ့ဆေးလိုက်
Yesterday at ‎02:32‎ · Like · 4
Mg Mg (၁၃) ကမ္ဘာပေါ်တွင် မီးအားမြှင့်စက်အရောင်းရဆုံးတိုင်းပြည်မှာမြန်မာပြည်ဖြစ်သည်။=ဒါမှားလားဗျ....Soe Thu Ko.....မှားရင်ခံလိုက်......ငါတ၇ုတ်ရောက်တော့ အင်ဗက်တာမေးတာ...အရူးလိုဝိုင်းကြည့်နေတယ်..ဟားဟား....မင်းကလဲ...သိသာတယ်နော်.....ဗဟုသုတနဲတာ
Yesterday at ‎02:35‎ · Like · 5
Peace Myanmar ကူးပီါ်ရှဲမယ် ခရက်ဒစ်ပေးမယ်...မှန်တာတွေ ထိုင်မပြောနဲ့ ကျူပ်နဲ့တွေ့ရင် အကုန်ကူးတယ်..ဒါဗြဲ.....
Yesterday at ‎04:25‎ · Like · 2
Phyo Wai ဟေးးးးးးးးးးးး ဒါမှတို့ဗမာ ကွ............:)
Yesterday at ‎04:29‎ · Like · 3
Moe Myat Swe ဟားဟားဟား..တော်၂..နောက်တဲ့လူ
Yesterday at ‎04:35‎ · Like · 2
Phyo Wai ဦးလုံ ကအမှန်တွေရေးတာကို ဗျ...... ရွာပြင်ရောက်တော့မှာပဲ...... :(
Phyo Wai ဦးလုံ ရွာပြင်ရောက် ရင်လည်း ထန်းရည် သောက်ပြီး ဒီလို အမှန်တရား ဟာသလေးတွေ ရေးပေးပါအုံးနော်.....like ..လို့ပါ .. ဟက် ...ဟက်... ဟက်..
Yesterday at ‎04:39‎ · Like · 2
Lon Ely ဟုတ်..သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ.....ဟာသ..အနေနဲ့သာ...ခံစားပေးပါဗျာ..ကျေးဇူးပါ
Yesterday at ‎05:22‎ · Like · 3
Aung Myat Soe :))
Yesterday at ‎06:52‎ · Like · 1
Heinlin Aung ဒါမှတို့ မြန်ပြည်ကွ
Yesterday at ‎08:32‎ · Like · 1
Phyu Htwemon အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် share လိုက်ပြီ
Yesterday at ‎09:33‎ · Like · 1
Soehlaing Aung တရုတ်တွေများနေတော့ တရုတ်သတင်းစာထင်ပြီး နောက်ဆုံးက စဖတ်ဖြစ်တာ အကျင့်ပါ။ ဖယောင်းတိုင်အရောင်းရဆုံး ၊မီးအားမြှင့်စက်အတင်သွင်းခံရဆုံး၊ ဆိုင်ကအမ်းလာတဲ့ ချိုချဉ်၊ဘောပင်၊တစ်ရှုးထုပ်၊တွေက အိမ်မှာဆိုင်ပြန်ဖွင့်လို့ရပြီ။
Yesterday at ‎09:59‎ · Like · 1
သားသား ဦး ကိုစိုးသူကိုရေ
ဆိုးတယ် ဆိုးသူရေ (*¿*)
Yesterday at ‎11:00‎ · Like · 1
Thanmin Soe ဟုတ်သမ ဟုတ်ဟုတ်....နဲ့တောင်နေသေး....
Yesterday at ‎11:23‎ · Like · 1
Zafar Ahmaad So truth. 10 x times share!
Yesterday at ‎11:34‎ · Like · 1
Zaw Min ဘာပြောပြောငါဘောကျတယ်
Yesterday at ‎11:58‎ · Like · 1
Ye Myint ဟိဟိ
Yesterday at ‎12:05‎ · Like · 1
Khin Mg Win210 2012
Yesterday at ‎12:33‎ · Like · 1
Khin Mg Win me kmwin 2013
Khin Mg Win r u be ze
Yesterday at ‎12:34‎ · Like · 1
Khin Mg Win where r u
Yesterday at ‎12:34‎ · Like
Khin Mg Win go to work
Demigod X Lay Democrazy per kwar
Yesterday at ‎13:51‎ · Like · 1
Snowwhite Malay မှန်ပါ့အေ..အပိုင်း၂ကဘယ်တော့လဲ မျှော်နေမယ်... :P
‎23‎ hours ago · Like · 1
Sky Blue ဒီမိုကရေ..ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်..ဦးတည်ချက်များ။။။
Nanda Pale right
‎21‎ hours ago · Like · 1
EiZar Mon ရှဲမယ်နော် အရမ်းမိုက်
‎21‎ hours ago · Like · 2
Hnin Hnin Khaing အပိုင်း ၂ ကို မျှော်နေမယ်နော်
‎20‎ hours ago · Like · 1
James Var for...Mg Mg and သားသားဦး ..
‎17‎ hours ago · Like · 1
Khin Htwe Yee thank you for make me smile....
Myat Moe တစ်ခုမကျန်မှန်ပါ့ဗျာ
Myat Moe ဒါ ဒို့တိုင်းတို့ပြည် ဒို့ မြန်မာပြည်
Myat Moe share ပါရစေ ကိုလုံ
Chaw Su ကိုဇော်ငြိမ်းအေးကကိုယ့်နိုင်ငံအ၇မ်းချစ်တော့သတင်းကောင်းတွေရှာဖွေတင်ပြထားတာဘဲ။ ဟိုမှာအဆင်တော်တော်ပြေပုံရတယ်နော်။မြန်မာပြည်ဘယ်တော့ပြန်လာဖို့ရှိလဲကြိုပြောပါ ရှောင်နေမလို့ ဟီးဟီး long time no see
Chan Nyein Aung (ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် ဖုန်း ကဒ် ဈေး အကြီး ဆုံး.တိုင်း ပြည် သည်.......မြန် မာ ပြည် ဖြစ် သည်....) ကို လဲ ထည့် ၇ အုံး မယ် လေ...သည်း ၇င်း တို့.....
Chosan Aye မှန် လွန်း နေ တယ်
‎16‎ hours ago · Like · 1
Lon Ely http://www.facebook.com/photo.php?fbid=124424871040091&set=a.101873026628609.3492.100004177352964&type=1&comment_id=106022&ref=notif&notif_t=photo_comment&theater
ထူးဆန်းထွေလာပြည်မြန်မာ -အပိုင်း ( ၂ )
(၁၇) အာဏာရူးလောဘရူးများကို တရိုတသေဖြင့် "...See more
by: Lon Ely
Ko Ko Aung သူခိုး တတ်ရင်အိမ်ရှင်ပါဖမ်းသော
‎15‎ hours ago · Like
Posted by The Facebook Times
ဧရာဝတီ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းက တလောက အတိတ်က ဓာတ်ပုံ တပုံကို သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တင်တယ်။ ဒါက တချိန်တုန်းက မီးမီးခဲက သူ့ကို နမ်းနေတဲ့ ဓာတ်ပုံပေါ့။...
ထူးအယ်လင်းနဲ့ အချစ်ရေးက ပြီးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ ကယ်ရိုလိုင်း
မတ်သူအောင်၊ ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၄၊ ဧရာဝတီ ကယ်ရိုလိုင်း (Calroline)၊ ၂၃နှစ်၊ B.A (Eco)၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်။ အခုလတ်တလောမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေက...
ဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ အားဆေးဆိုရင်... မနက်ဖြန်မှာကျနော်ဟာ ဘာသာမဲ့ ဖြစ်တယ်။
ဆရာ ဆယ် ၀တ်စရာမရှိ၊ အရှက်လုံအောင် အစုတ်နဲ့ နေလို့ရတယ်... စားစရာမရှိ၊ ထမင်းကြမ်းခဲ ဆားနဲ့ စားလို့ရတယ်....။ တစ်နေ့စာ ၀မ်းရေးတော...
၀ိုင်းစုခိုင်သင်း ရဲ့ ဘာဘာညာညာ...
Waine Su Khaing Thein 4,114 people like this. 182 shares မလွမ်း ပို who is that ? WineSu Tuesday at ...
Israel အမျိုးသမီး တစ်ယောက် Palestine ကောင်လေးကို ကာကွယ်ခဲ့
ဈာန် Israel အမျိုးသမီး တစ်ယောက် Palestine ကောင်လေးကို ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ သတင်းဟာ ကမ္ဘာ့ လူသား သန်းပေါင်းမြောက်များစွာကို အမြင်သစ...
အဖြူရောင်စာမျက်နှာ မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့သော စိုင်းစိုင်း မွေးနေ့ စတိတ်ရှိုးတွင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က သက်မွန်မြင့်အား ပွေ့ချ...
The Irrawaddy (Burmese Version) မန္တလေး ၃၃ လမ်းပေါ်ရှိ ဒိုင်းမွန်းပလာ အပေါ်ထပ်မှ မိမိကိုယ်သေကြောင်းကြံစည် ခုန်ချရန် ကြိုးစားသူတဦးကို ရ...
ဘုန်းကြီး ခေါင်းခေါက်ပြီးမှ Peace လုပ်လို့ ရသလား???
Options Thway Thit Sar စစ်တပ်က စစ်သားတွေ အတုံးအရုံးကျခဲ့တဲ့ အချိန် တုန်းက KIA ကို အခု စစ်ပွဲ ရပ်ပါဆိုပြီး အော်နြေ...
Nay Myo Zin နေမျိုးဇင်ကို တပ်မှ ဖြုတ်ပစ်ခံရသူဖြစ်ကြောင်း၊ နည်းမျိုးစုံနဲ့ မဟုတ် မမှန် ၀ါဒ ဖြန့်နေသူတို့ သိစေဖို့ တင်ပြခြင်းဖြစ...
အပြမတော်တဲ့ မြန်မာဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ မကြည့်ရဲရင် နိုင်ငံခြားကားလဲ မကြည့်နဲ့
Mg's Theint မရီုက်ဖူးလို့တော့မပြောဘူး ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကိုပါ မကြည့်နဲ့တဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေမပြောဘူး နင်တို့ မြန်မာမတွေ Share ...
သတင်း နှင့် information လင့်များ
မောက္ခ ထုတ်ဝေပြီး ပညာရေး မဂ္ဂဇင်းများ
ကြေးမုံ နှင့် မြန်မာ့ အလင်း
မဇ္ဈိမသတင်း ဌာန (မြန်မာပိုင်း)
လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ (မြန်မာပိုင်း)
ကရင်နီ (ကယား) သတင်း ဌာန
ချင်း သတင်း ဌာန
Ethnic Nationality Council of Burma
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်း အချက်အလက်
2010 ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူများအား လှို...
နေပြည်တော်တွင် ရဲနှင့် အနှိပ်ခန်းပေါင်းပြီး အမှုဖုံ...
ခေါင်းဆောင်တဦးအနေဖြင့် တရားသောပစ်ဒဏ်ခံယူမည်ဟု စိုင...
ပစ်ခြင်း ပစ် မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး၊ ပြည်သူကိုသာ တဲ့တ...
ဦးဖိုးကျား၏ ကိုယ်တွေ့ ၀တ္ထုတို
ဘင်ဂါလီ ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်မည်. နည်းပညာ မြန်မာ...
တပ်မတော်သား သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားလက်ဆုံ
ဒီနေရာမှာ Email ထည့်ထားခဲ့ပါ။ သတင်းများပို့ပေးပါမည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှ စိတ်ဝင်စားစရာ မြန်မာသတင်းများ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာကတော့ thefacebooktimes@gmail.comဖြစ်ပါသည်။
The Facebook Times. Simple theme. Powered by Blogger.